Muxuu Eeygeygu Albaabka agtiisa u seexdaa? 5 Waxyood Oo Aad Ogtahay
Sheekooyinka Eyga oo Daalacanaya
In ka badan ..
Bogga ugu weynEeyaha DaryeelMuxuu Eeygeygu Albaabka agtiisa u seexdaa? 5 Waxyood Oo Aad Ogtahay
Eeyaha DaryeelXaqiiqooyinka Raaxada
By Eeyaha Vets
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Febraayo 18, 2022 Eeyaha Vets
Muxuu Eeygeygu Albaabka agtiisa u seexdaa?
Eeygu wuxuu ilaalinayaa meeshaada!
Meeshu waxay u muuqataa mid raaxo badan
Eeygu ma rabo inaad guriga kaga tagto
Xayawaankaagu waa cajiib!
Xayawaanku qof buu sugayaa
Xayawaanka rabbaaniga ah waa kuwo aad u dahsoon. Waxyaabo badan oo ku saabsan saaxiibadayada dhogorta leh ayaa nagu wareeriya. In albaabka agtiisa lagu seexdo waa mid ka mid ah waxyaalahaas dahsoon!
Waxaa laga yaabaa inaad u iibsatay sariir raaxo leh eeyga. Waxa laga yaabaa inay sariirta isticmaasho muddo ka dibna u dhaqaaqdo dhinaca albaabka. Waxaad la yaabi doontaa "muxuu eygeygu u seexdaa albaabka agtiisa"!
Eygaagu ma necbahay sariirta cusub ee aad iibsatay mise meesha wax gaar ah ayaa ka jira? Xayawaanku waxa laga yaabaa in uu isku dayayo in uu gudbiyo farriin ama waxa laga yaabaa in ay caado u tahay waayihiisii ​​duurjoogta ahaa.
Dad badan oo ku dhaqma xayawaanka ayaa isku dayaya inay fasiraan sababta eeyaha qaarkood ay u seexdaan albaabka. Aragtiyo lagu qanci karo ayaa soo baxay kuwaas oo ka jawaabi kara su'aashaada!
Aadanuhu waxay ku tiirsan yihiin eeyaha si ay u ilaashadaan hantidooda oo ay uga fogeeyaan martida aan loo baahnayn. Eeyadu waxay ilaalin jireen albaabka laga soo galo marka aanay ilaalinayn dhulkii loogu talo galay. Qoysaska casriga ahi waxa laga yaabaa inaanay u baahnayn ilaalintaas heerka sare ah, hab-dhaqanka eeyaha weli waa sidii hore.
AKHRI: Sida Looga Dhigo Raritaanku Mid Raaxo U Ah Eyga
Eeyadu had iyo jeer waxay isku dayaan inay ilaaliyaan milkiilayaashooda, xitaa haddii qofka soo socda uu yahay mid saaxiibtinimo leh. Dabeecaddooda ayay ku jirtaa inay dadka ka shakiyaan. Waxaa laga yaabaa in eeygaaga uu isku dayayo inuu sameeyo wax la mid ah.
Kiishashkaagu wuxuu seexanayaa albaabka agtiisa si uu u ilaaliyo guriga.
Waxay doonaysaa inay ka celiso dadka aan loo baahnayn. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay seexato albaabka agtiisa si looga hortago kuwa soo galaa!
Eeyadu waxay leeyihiin dhogor qaro weyn waxayna ka ilaalisaa qabowga. dhogorta isku midka ah waxay noqotaa dhibaato maalmaha xagaaga kulul. Xayawaanka qaarkood waxay isku dayaan inay qoyan si ay u qaboojiyaan oo ay ula qabsadaan kulaylka kulul. Marka aanay suurtogal ahayn in la qoyo, eeyaha ayaa doorta meel ay ka heli karaan neecawda nasteexada leh.
Sariirta ayaa laga yaabaa inay dareemto wax ka kulul oo qabow iyo sariiradaha qaboojiya. Sidaa darteed, eyda intooda badani waxay seexdaan sagxada iyo albaabka agtiisa. Eeygaaga wuxuu ku soo laaban doonaa sariirtiisa haddii aad ku ilaalin karto heerkulka raaxada ee qolka.
Ma qaadan kartid meel kasta oo aad tagto. Eeygu ma garanayo waxaana laga yaabaa inuu isku dayo inuu ku raaco hawl kasta. Taasi waxay noqon kartaa sabab uu eeygu u seexdo albaabka agtiisa.
AKHRI: 21 -ka ugu sarreeya eeyaha eeyaha (xaqiiqooyinka naxdinta leh ee aad u baahan tahay inaad ogaato)
Eeyo badan ayaa sidaas u sameeya si ay ula joogaan waalidkood mar kasta oo ay suurtagal tahay. Dhaqankani wuxuu u muuqdaa mid xanaaq badan markaad guriga uga baxayso shaqo muhiim ah. Xayawaanka ayaa laga yaabaa inuu xiro albaabka oo uu aad ugu faraxsan yahay inuu ka guuro.
Dhaqankan waa la kontarooli karaa haddii aad maalin walba u soo saartid jeebka si aad u socoto. Bakhaarku wuxuu joogi doonaa albaabka haddii aadan dibadda u bixin si ku filan si uu u daboolo baahidiisa jimicsiga. Markaa, daryeesho xayawaankaaga rabaayada ah si aad uga fogaato dhibaatooyinkan oo kale.
Eeyadu malaha waa noolaha ugu xiisaha badan meerahan. Had iyo jeer waxay rabaan inay noqdaan meesha ficilku ka socdo. Xayawaankaagu waxa laga yaabaa inuu noqdo mid ka mid ah bashbashyada xiisaha leh ee jecel inay ka fiiqaan guriga dibaddiisa. Xayawaanku wuxuu u dhaqaaqi karaa dhinaca daaqadda haddii aad xirto albaabka.
xiisaha Tani waxay noqon kartaa sababta uu xayawaankaagu u seexdo albaabka agtiisa. Waxay rabtaa inay daawato oo maqasho wax kasta oo ka dhacaya guriga dibaddiisa. Eeygu wuxuu kaloo jeclaan karaa inuu baxo haddii uu arko ama maqlo wax xiiso leh.
Xayawaanku wuxuu diidi doonaa inuu ku seexdo sariirta haddii aan la dhigin meesha uu jecel yahay. Sariirta u wareeji albaabka agteeda ka dibna u fiirso eygaaga. Waxay u badan tahay inay ku raaxaysan doonto hurdo raaxo leh oo sariirta korkeeda ah intii aad ku seexan lahayd dabaq adag!
AKHRI: Miyaan U Baahanahay Caymiska Naafada Sida Dhakhtar Xoolaha?
Eeyadu ma jecla markaad keligood kaga tagto guriga. Waxay si joogto ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ka dhacaya guriga dibaddiisa. Way ku farxaan markay maqlaan codka gaadhigaaga ama raadkaaga. Waxay u badan tahay inay tahay xilliga ugu xiisaha badan ee xayawaanka maalintii, sidaas darteedna wuxuu had iyo jeer ku sugayaa albaabka.
Qofna si hubaal ah uma odhan karo waxa eeygu ka qabanayo albaabka agtiisa. Sababaha ugu macquulsan ayaa lagu sharaxay qoraalkan. Waxaad bedeli kartaa dhaqankan adiga oo si wanaagsan u daryeelaya xayawaanka rabaayada ah. U oggolow inuu si xor ah u dhaqaaqo oo quudiyo cuntooyinka ugu fiican. Eeygaaga ayaa ku nasan doona meesha saxda ah si uu uga fogaado dhibaatooyinka caafimaad.
Waxaan ku dadaaleynaa inaan siino macluumaadka ugu dambeeyay ee qiimaha leh kuwa jecel xayawaanka si sax ah iyo caddaalad ah. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku darto boostadan ama nala wadaagto, ha ka waaban inaad na soo gaad. Haddaad aragto wax aan u ekayn, nala soo xiriir!
Views Views: 2,648
muxuu eygu u seexdaa
muxuu eygeygu albaabka agtiisa u seexdaa
article PreviousEyda ma la siin karaa khudaar? 9 khudaar iyo miro sun u ah eyda
Next articleEey-daawaynta waxay hagaajin karaan caafimaadka maskaxda iyo jidhka
LA XIRIIRA ARTICLES
Faa'iidooyinka Caafimaadka Maskaxda ee Haysashada Eeyaha Kuleejka
Sida Loo Codsado Kulliyadaha Caafimaadka Xoolaha ee USA 2022
7-da Ey Isku Dhafan ee ugu caansan ee Qoysaska
Nolosha Yar ee Schnauzer - Intee in le'eg ayay Eydani nool yihiin?
Eeyadu miyay riyoodaan? Muxuu Eeyga Ku Riyoonayaa? - 5 Xaqiiqo oo la Oggo
Ma Aqbali Kartaa Eey Dib Loo Celiyay: Hagaha Kaa Caawinaya Inaad Sameyso Go'aanka Saxda Ah
Sida Looga Dhigo Raritaanku Mid Raaxo U Ah Eyga
Talooyinka ugu Fiican ee La Socda Eyda
Top 7 Sababood Oo Ay Tahay Inaad U Qubeysato Eygaaga
Waa maxay sababta Eygaygu ii qaniino - 3 Xaqiiqo oo la Oggo
Paws Eey: Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Doodii Wayn: Muxuu Eygaagu U uriyaa Sida Kalluunka? 5 Talooyin in la ogaado
- Xayeysiis -
Si cajiib ah
Nuxurka & Xiriirinta
Hubin by	Sur.ly
MT: Hagaha Abuurista Qaabka E-mailka Xayawaanka
5 Arrimo Caafimaad Ee Eyga Iyo Waxa La Sameeyo Haddii Aad Ka Shakiso
Waa immisa Cimilada Dachshund? 7 Arimood oo la Ogaa
6 Sababood oo Suurtagal ah ee Miisaanka Eeygaaga (Waxyaabaha la tixgeliyo!)
Sheekooyinka Eyga oo Daalacanaya101
Soo hel Talooyinkii ugu Dambeeyey ee Daynta, Magacyada Eeyga, Caymiska Xayawaanka iyo Sheekooyinka Ku Saabsan Eeyaha. Dogsvets.Com Waa Mareeg Gaar ah oo Cusub oo loogu talagalay Eyda Jecel iyo Milkiilayaasha Xayawaanka
Nala soo xiriir: thedogsvets@gmail.com ama info@dogsvets.com